Sitholakele "mitral umphini prolapse" ibekwa iziguli umphini enezinto (elilodwa noma amabili) bahlose wangaphakathi ATRIUM kwesokunxele ngesikhathi ventricular ukusikwa. Lesi sifo kungenzeka ukuthi umataniswe nge normal ukusebenza inhliziyo noma nezinye pathologies.
Kuye kutsi liyini lizinga emphethweni nokuwohloka siyenzeka, ukuhlukanisa mitral umphini prolapse degrees ezintathu. PMK 1 degrees - ifomu omnene kakhulu lesi sifo. enezinto kuka kulesi simo senzeka ku 3-6 amamilimitha angu, kodwa ngaphandle kwalokho, lesi simo singenzeka kanye nomehluko (kufanele kusho ukuthi umuntu enempilo, basuke uvaliwe Friend). Ngenxa yalokho, phakathi kwamaqabunga bangase bafinyelele igebe, okuyinto isiqala zingene igazi ngokushesha. Kulokhu, ukugeleza kwegazi ngizoya emuva. Lesi senzakalo ngokuthi "regurgitation." Kungase kube lamadigri ezintathu.
PMK 1 degree nge regurgitation 1 degree kusho ukuthi igazi livela kuphela valve. Le ndlela sifo kubhekwe njengento evamile, njengoba swirls igazi kuvele ubuncane kwehlukana enezinto.
Prolapse of valve mitral bezinga lokuqala ikakhulu kuthinta izingane ezineminyaka ephakathi kuka-iminyaka engu-2 18. Kakhulu kangakanani othambekele ngalokhu kugula abadala. Ngokuvamile, ingase isifo ephelezelwa lezi zifo ezilandelayo:
- isici inhliziyo (azalwa naso) - 37%;
Izimpawu PMK 1 degree kungabonakala nasemkhakheni kukho konke ukuphila lesiguli, kusukela ebuntwaneni. Okuningi ebonakalayo ziba iminyaka eyisikhombisa. ososayensi Medical bakholelwa ukuthi lesi sifo kuwo + nangayiphi indlela ehambisana ne-ubulili lesiguli, kodwa isibalo sabesifazane abangenwa yilo isifo, kabili njengoba amadoda.
PMK 1 degrees kubangela ubuhlungu benhliziyo, tachycardia futhi umuzwa ukuhluleka kwenhliziyo, kanye ubuthakathaka, iphika, yokufikelwa, isiyezi. Ngaphezu kwalokho, iziguli zingase zibhekane ongaphakeme ngokomzimba umsebenzi, ukukhathazeka, ukushintshashintsha kwesimo psycho-ngokomzwelo. Izingane ezincane zivame ukhathazeke lutho futhi acasuke, bayacindezeleka.
Kaningi, degree of mitral umphini prolapse kungase kuhambisane izimpawu zezinzwa izicubu dysplasia, ezifana
- Imizimba mncane ngokweqile,
- ukukhula okusezingeni eliphezulu,
- superelasticity kwesikhumba,
- ukuthuthukiswa ezibuthakathaka imisipha,
- ukugobeka komhlandla
- ukukhanya isisindo,
- Ukuhamba eliphezulu emalungeni,
- ukunciphisa umbono,
- ukusonteka kwesifuba,
- izindwani iphiko emise.
Cishe njalo PMK 1 degrees izimbangela anda umfutho wegazi nokushaya kwenhliziyo ukushesha. Kucatshangwa ngakho konke lokhu akukho izinguquko imingcele inhliziyo uyalandelwa.
Lapho regurgitation mitral ephelezelwa arrhythmia futhi kuphula umthetho we repolarization phezu ECG, odokotela batusa nokukhawulela umsebenzi nalapho uvivinya umzimba ukukhetha, ngokusekelwe eziyinkimbinkimbi yokwelapha umsebenzi.
Uma lesi sifo sitholakale umuntu ingane, kufanele inikwe yokutakula kuphazamiseka autonomic.
Izinyathelo ezihlose nokuvimbela okuphambene, futhi ukuvimbela ukuthuthukiswa yezinkinga okubangelwa isifo. Ngenxa yale njongo kubalulekile khona izinqubo ezikhethekile zokwelapha kanye nokwenza imisebenzi ethile ebekiwe. Izingane kufanele abhaliswe Ihlahlubo ibhekane Luhlolo gqwa - ECG.
Ngo seziguli ezisencane lesi sifo hhayi abadliwa ukuxakeka. Nokho, kwezinye izimo, kungenzeka thromboembolism, endocarditis infective noma sibi regurgitation mitral. Uma lesi sifo washaya indoda ebuntwaneni, e inqubo yokukhula, ke iyovele ibhebhetheke. Ngakho-ke kufanele njalo kungavinjelwa prolapse futhi uphethwe yayo.
Uyini ubuhlungu imbuthuma?
SARS: izimpawu kanye nokwelashwa kahle
Izimpawu yokuqala HIV
Biography kanye ukuphila komuntu Keyt Bosuort
Izikhali Military - umlando ukuvela ezinye
Honda Bros 400 - edume Naked City. Indawo, izibuyekezo, izithombe
"Nebilong": yokusetshenziswa. "Nebilong": ukubuyekezwa kanye analogue
"Kia Spectra" - izibuyekezo abanikazi kanye nobuntu Sedan-Korean
Zonke abawinile of the "Miss World" kusukela ngo-1951 kuya 2016
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngesikhathi sokukhulelwa dopegit.
Futha imiyalo 'Lugol' ukusetshenziswa
Izinwele ukususwa zonke, noma ngabe ngempela